एक महिनाअघि सरकारको कटु आलोचना गरेका माधव नेपालले अहिले मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरे
कर्पोरेट नेपाल , २२ कार्तिक २०७५, बिहीबार, ११:५२ am
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधव नेपालले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्नेबारे सोच्नै नसकिने बताएका छन् । करिव एक महिनाअघि संसदमा बोल्दै सरकारको कटु आलोचना गरेका उनले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको देउसी–भैलो कार्यक्रममा भने सरकारको मुक्तमण्ठले प्रसंशा गरे ।
नेता नेपालले भने, ‘अहिले उहाँको विकल्प खोज्ने कुरा सोच्नै सकिन्न । यो सरकारले काम गरेर देखाउँछ । मैले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक कुरा गरेको छु । उहाँमा आत्मविश्वास छ । मसँग उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ । मैले भनेको छु, हामी छौं अरुको कमिकमजोरी आलोचना गर्न । तपाई ढुक्क भएर सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् । यदि कमिकमजोरीहरु भएका छन् भनेपनि सुधार गरेर जानुपर्छ ।’
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरामा वर्तमान सरकार सफल हुने पनि उनको दाबी छ । नेता नेपालले भने, ‘केपी ओलीको सरकार भनेको नेकपाको सरकार हो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो । यसको अगुवाई ओलीजीले गर्नुभएको छ । यो सरकार असफल भयो भने सिँगो पार्टी असफल भएको देखिन्छ । यो सरकारसँग भिजन छ । संकल्प छ । यसले आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको छ । भएका साधन र स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेपनि प्रधानमन्त्रीजीसँग स्पष्ट सोच छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले अब कर्मचारीतन्त्रलाई पनि त्यही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेता नेपालले भने, ‘मन्त्रीहरुलाई परिचालन गर्न पार्टी बलियो हुनुपर्छ । पार्टीले सबै ठाउँमा आफ्नो ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो पार्टीका गतिविधिहरुलाई निरीक्षण गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारको काम पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
अब देशमा विकास कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘विकास अहिले देशको आवश्यकता हो । विकास देशको उन्नति र प्रगतिको लागि आवश्यक छ । राजनीतिक क्रान्ति भैसकेपछि अब विकासको लागि सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक, साँस्कृतिक आर्थिक रुपान्तरणप्रति छ । सरकारले आफ्नो काम त्यहीअनुसार गरिरहेको छ ।’
नेता नेपालले विकास भनेको समष्टिगत विकास पनि भएको बताउँदै भने, ‘विकास र समृद्धिको लागि दुई वटा पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा मानवस्रोत । हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अनि, दोस्रो भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । बाटाघाटाहरु, विजुली चाहिन्छ । यो बीचमा अनेकन काममा सरकार जुट्नुपरेको थियो । विम्स्टेकजस्ता क्षेत्रिय फोरममा हामी जुट्यौं । संयुक्त राष्ट्रसंघमा उपस्थिति जनाऔं । अब विकास तथा निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् ।’
गाउँदेखि केन्द्रसम्म एकतामा अन्यौलता देखिएको छ नि ? भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘यही महिनामा एकता सम्पन्न गर्ने योजना थियो । तर, प्रधानमन्त्रीजी विरामी हुनुभयो । उहाँ स्वस्थ भएर आएपछि सबै कुरा टुँगो लाग्छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्मको एकता टुँगो लगाउँछौं । जनवर्गीय संगठनको एकतापनि टुँगो लगाउनुपर्छ ।’
स्थायी समिति बैठक बस्न नसक्नुमा पनि प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थता नै कारण रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । नेता नेपालले भने, ‘सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बस्ने योजना थियो । तर, उहाँ (प्रम) एक्कासी विरामी हुनुभयो, अब उहाँ आरामपछि फिट भएर आएपछि बैठक बस्छ ।’
‘सरकारको गति अब गाडीबाट रेल, रेलबाट जहाज, त्यसपछि जेट विमान हुँदै रकेटको स्पीडमा पुग्छ’
पौडेलको तर्क– अहिले नै सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन, तीन बर्ष कुर्नुपर्छ
सुरेन्द्र केसीको आरोप– निर्वाचनका क्रममा गरेका बाचाहरु सरकारले बिर्सियो
‘ओली र प्रचण्डबीच कुरा मिलिसक्यो, प्रचण्डलाई अमेरिकाबाट निम्तो पनि आइसक्यो’
‘बुढीगण्डकी असफल कम्पनीलाई दोहोर्याए दिने निर्णय फिर्ता नभए यो सरकार असफल हुन्छ’
काँग्रेस नेताको प्रश्न– दशैं मनाउन कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने सरकारले के संवृद्धि देला ?
ग्लोबल आइएमई बैंकले फोटो पत्रकारलाई हस्तान्तरण गर्यो प्रेस ज्याकेट
‘उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालिसके, लकडाउनको अवधि थपेरमात्रै हुँदैन’
१६६ जना थपिए कोरोना संक्रमित, २ वर्षिय बालिकासहित ८ जनाको मृत्यु
बजेटमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आएनः एफएनसीसीआई
‘दश खर्ब राजश्वको स्रोत के हो ? बैंकको ब्याज र बत्तिको मिटर मात्रै चढाएर देश बन्छ ?’